Gong nke Iri na Otu Fa cai Gong nke Iri na Otu Fa cai
Gong nke Iri na Otu Fa cai
The Chinese afọ ọhụrụ dị ka nnukwu party n'ụwa. Ọ na-eme ememe site karịrị otu ijeri Chinese n'ụwa nile na ihe festive fervor. Na a oghere egwuregwu si IGT na-kpọmkwem dabeere na na. N'ezie pụtara Gong nke Iri na Otu Fa cai onwe ya bụ Obi ụtọ na afọ ọhụrụ. Dị ka ememme ọ dabeere na egwuregwu bụ nnukwu, fun na-ụtọ. Ọzọkwa, egwuregwu a na-eme a bit ihe karịrị nanị ẹnyene, ị ga-esi a ohere iji merie a jụụ 8 nde dollar. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma online ohere mpere UK.
IGT ma ọ bụ International Gaming Technology bụ a oghere egwuregwu Mmepụta nke nwere ya n'isi ụlọ ọrụ dị na Las Vegas, Nevada. Ha anọwo na oru-a nnọọ ogologo oge na nwere ọtụtụ ihe ma ama oghere egwuregwu na ha roster dị ka 100K Pyramid na Da Vinci Diamonds. Ya egwuregwu vidio na ihe kasị mma online ohere mpere UK
Ọ bụ ihe na online video oghere egwuregwu na 5 -esi anwụde na 50 paylines. The egwuregwu nwere ihe Oriental isiokwu, ọdịdị zuru oke nke nke e weghaara ebube ma na imewe na ndịna-emeputa nke egwuregwu. The akara na-niile isiokwu yiri. I nwere Dragon piñata uru a 100x gị n'elu osisi, Koi azu kaapu uru 125x, Phoenix uru 200x na n'ikpeazụ a odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dragon nke ahụ bụ ọnụ ahịa a oke 500x. Mgbe ahụ n'ezie na e nwere anụ akara a eme ihe dị ka a dochie anya ndị ọzọ niile na akara ma e wezụga ikposa akara. Ọzọkwa anụ bụ uru 600x gị n'elu osisi ma ọ bụrụ na ị na adaa 5 nke ha na-esi anwụde. Na-eme ka ọ onye nke kasị mma online ohere mpere UK
Ọ nwere a free atụ ogho bonus gburugburu nke a na-triggered site ọdịda ikposa akara na-esi anwụde 1,3 na 5. The ọnụ ọgụgụ nke free spins ị ga-esi mgbanwe oge ọ bụla ị na-akpalite atụmatụ ahụ dị ka ọ na kpebiri enweghị usoro.
Ma, ihe kasị mma banyere Gong nke Iri na Otu Fa cai oghere bụ jackpot gburugburu. A mma na-a-enweghị usoro triggered otu na nwere 4 etoju. Emeri na 4th larịị akpata ị na jackpot nke 8 nde dollar. Sịkwa na ọ bụ onye nke kasị mma online ohere mpere UK
Gong nke Iri na Otu Fa cai bụ a oghere na a elu volatility fim. Egwuregwu na-karịsịa ezubere iche n'ebe ndị Player na-n'anya ya ụtọ isi a elu n'ihe ize ndụ egwuregwu. Ma nke ahụ apụtaghị na ndị ọzọ apụghị ịnụ ụtọ egwuregwu a. Ọ bụrụ na ndị chaa chaa na-eji amamihe, ha nwere ike nwere otutu fun Igwu egwuregwu a na-enweghị nchegbu banyere ha wallets. Megodị ihe a – Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma online ohere mpere UK